आलोचनाबाट डराउनुहुन्छ ? यसरी 'ह्यान्डल' गर्नुहोस् आलोचना - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips आलोचनाबाट डराउनुहुन्छ ? यसरी ‘ह्यान्डल’ गर्नुहोस् आलोचना
आलोचनाबाट डराउनुहुन्छ ? यसरी ‘ह्यान्डल’ गर्नुहोस् आलोचना
मानिसले आलोचनाको डरले आफूलाई गर्न मन लागेको काम पनि हिच्किचाउँछ भने उत्साही रुपले काम गरिरहेको व्यक्ति आलोचनाले हतोत्साही हुन सक्छ। तर आलोचनालाई उपयुक्त तरिकाले लिन सक्ने व्यक्तिले आफ्नो लक्ष्यलाई कहिल्यै छोड्दैन ।
आलोचनालाई कसरि लिने ?
आलोचना हरेक काममा हुन्छ। त्यसैले आलोचनासंग डराएर काम नगर्नु भनेको मूर्खता हो। तपाईं मूर्ख नबन्नुहोस्।
तपाईंको लक्ष्य के हो ? आलोचनालाई बुझ्नुभन्दा पहिले आफ्नो लक्ष्यलाई आत्मसात गर्नुहोस्। अठोट गर्नुहोस् र आफूमा हिम्मत भर्नुहोस्।
प्रत्येक व्यक्तिको आ-आफ्नो विचार हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले आलोचना गर्नु भनेको त्यो व्यक्तिले तपाईं वा तपाईंको कामप्रति आफ्नो विचार प्रकट गर्नु हो र, तपाईंको योजना र लक्ष्य भनेको तपाईंको आफ्नो विचारबाट उत्पादन भएको हो । अरुको विचारले गर्दा आफ्नो विचारलाई छायाँमा पर्न नदिनुहोस्।
आलोचना दुई प्रकारको हुन्छ, सकारात्मक र नकारात्मक। सकारात्मक आलोचनाले तपाईंमा अझ निखारता आओस् भन्ने चाहेको हुन्छ भने नकारात्मक आलोचना तपाईंलाई पछाडी धकेल्न प्रेरित हुन्छ।
सकारात्मक आलोचना भनेको ‘ तिमीले यसो गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ! तिमीले यो भन्नु वा गर्नुको साटो यसो भनेको वा गरेको भए हुन्थ्यो ‘ जस्तो हुन्छ भने नकारात्मक आलोचना भनेको ‘ तिमीले यो गर्नै सक्दैनौ । तिमीले यो काम गरेर कहीं पुग्दैनौ। त्यो लक्ष्यसम्म पुग्ने तिम्रो क्षमता नै छैन ‘ जस्तो भनाइ हो।
तपाईंको कामको बारेमा आलोचना गर्ने व्यक्तिले तपाईंले गरिरहेको कामलाई बुझेको छ कि छैन, त्यो सोंच्नुहोस्। तपाईंको कामलाई नबुझेको व्यक्तिले दिएको आलोचनालाई गम्भीरताका साथ नलिनुहोस्।
कामलाई बुझेको व्यक्तिले गरेको आलोचना हो भने, त्यो आलोचनाबारे उक्त व्यक्तिसंग र त्यो क्षेत्रको ज्ञान भएका अरु व्यक्तिसंग कुरा गर्नुहोस् र आफ्नो योजना र त्यो आलोचनालाई जोडेर हेर्नुहोस्। आलोचनालाई योजनाको लागि सुझावको रुपमा हेर्नुहोस्, लक्ष्य नबदल्नुहोस्।
तपाईंको आलोचना गर्ने व्यक्तिले कस्तो अवस्थामा आलोचना गरेको हो ? उसले रिस वा आवेगमा आएर आलोचना गरेको हो भने, गम्भीर तरिकाले नलिनुहोस्।
तपाईंको काम वा योजनाको आलोचना गरेको व्यक्तिले तपाईंको क्षमतालाई कत्तिको बुझेको छ ? तपाईंको क्षमतालाई नबुझेको व्यक्तिले दिएको आलोचनालाई आफ्नो क्षमता समाजलाई देखाउनको लागि उत्प्रेरणाको रुपमा लिनुहोस्।
कुनै पनि आलोचनालाई व्यक्तिगत रुपमा नलिनुहोस् । त्यो आलोचनाको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षलाई केलाउनुहोस् र सकारात्मक पक्षमा जोड दिनुहोस्।
सकारात्मक सोंच राखेर हेर्नुभयो भने आलोचनाले तपाईंलाई निराशामा धकेल्दैन। त्यसले तपाईंलाई अगाडी बढ्न प्रेरित गर्छ।
Previousप्रेरक प्रसंग : नदी कसरि तर्ने ?
Nextरिचार्ड ब्रान्सनका सफलताका सुत्र